Topic: Khusbu Oli accuses Arpan Koirala on the death of Chari, who is Arpan?
Author Topic: Khusbu Oli accuses Arpan Koirala on the death of Chari, who is Arpan? (Read 3068 times)
Re: Khusbu Oli accuses Arpan Koirala on the death of Chari, who is Arpan?
« Reply #10 on: August 14, 2014, 03:57:09 AM »
इन्स्पेक्टर कुमुदले भने -खुश्बुलाई प्रेम प्रस्ताव राखेको पुष्टि भए सार्वजनिक स्थानमा झुण्डिन तयार छु
काठमाडौ -प्रहरी कारबाहीमा मारिएका डन दिनेश अधिकारी चरीकी प्रेमिका खुश्बु ओलीलाई प्रेम प्रस्ताव राखेको पुष्टि भए आफूलाई सार्वजनिक स्थानमा झुण्ड्याएर नुनचुक छर्न प्रहरी इन्स्पेक्टर कुमुद ढुंगेलले चुनौती दिएका छन् ।
चरीकि पैमिका खुस्बुले आफूले प्रेम अस्वीकार गरेका कारण प्रहरी इन्स्पेक्टर कुमुद समेतको मिलेमतोमा चरीको हत्या भएको दाबी गरेपछि त्यसको खण्डन गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन । आफु निकटका केहि पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दै उनले आफूले कहिल्यै पनि खुश्बुलाई प्रेम प्रस्ताव नराखेको र चरी प्रकरणसँग खुश्बुको कुनै कारण नजोडिएको समेत दाबी गरे । ममाथि लागेको आरोप खुश्बु ओली र मिडियाले पुष्टि गरेर देखाओस्, म सार्वजनिक स्थानमा झुण्डिन तयार छु, मेरो शरीरमा नुनचुक छरियोस् ।’ – ढुंगेलका भनाई उधृत गर्दै एक सञ्चारकर्मीले भने ।
महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकाको विशेष टोलीमा कार्यरत ढुंगेल नाम चलेका गुण्डाहरु रमेश बाहुन, शुक्रे तामागं, अभिशेष गिरीजस्तालाई नियन्त्रणमा लिन सफल प्रहरी अधिकृत हुन ।
« Reply #11 on: August 14, 2014, 12:03:25 PM »
अर्पणसँग राजकुमारी झै देखिन्थिन खुश्वु
गुण्डा नाइके दिनेश अधिकारी चरि मारिएपछि खुश्वु ‌ओलीले सो प्रकरणमा जोडेर दुई व्यक्तिलाई मुसेकी थिइन। ति मध्ये एक उनकै पूर्व प्रेमी थिए अर्पण कोइराला। कोइराला तिनै थिए जस्ले खुश्वुसँग वेलायतमा सँगै आफ्ना यादगार पल विताएको दावी गरेका छन्। नेपाल र बेलायतमा गरेर ८ बर्ष सँगै विताएको अर्पणको उनको दावी छ।
बेलायतको अक्सफोर्डमा अध्ययनरत रहँदा खुश्वु तिनै अर्पणको फ्ल्याटमा सँगै बस्ने गरेको अर्पणले दावी गरेका छन्। सो समयमा उनले फर्माइस तथा इच्छा पुरा गर्न आफूले दिलोज्यानले लागेको पनि दावी गरेका छन्। अर्पणले भनेका छन खुश्वुलाई राजकुमारी जस्तो बन्ने इच्छा पुरा गर्न भएको सम्पति सकाएर अर्पिए। तर उनले धोका दिइन। भाउजु भन्ने चरिसँग हिडेर आफूलाई धोका दिएकी खुश्बुले चरि मारिएपछि भारतमा कामको सिलसिलामा रहेकव आफूलाई आरोप लगाएको मा पनि उनले गुनासो गरेका छन्।
आफूसँग प्रेमको प्रस्ताव राखेर नस्विकारेपछि चरिको हत्याको योजना गरेको खुश्बुले आरोप लगाएपछि अर्पण र खुस्वुका केहि तस्विर सार्वजनिक पनि भइरहेका छन। के यि तस्विरहरुले प्रेसमको प्रस्ताव गरेर छुट्टिएकव जस्तो देखिन्छ की कुनै समय छुट्टिनै नसक्ने प्राणि थिए प्रस्ट पार्छ आफै छुट्टयाउनुहोस।
« Reply #12 on: August 14, 2014, 11:36:35 PM »
'चरी' अर्का २ गुण्डा नाइकेको हत्या गर्न आएका थिए : विशेष खुलासा
« Reply #13 on: August 15, 2014, 07:40:45 AM »
चरीले मलाइ मर्छु भनेका थिए-अर्पण कोइराला
गुन्डा नाइके दिनेश अधिकारी चरी मारिएपछि उनकी प्रेमिका खुश्बु अोली निकै चर्चामा छिन् । उनले चरी प्रहरीले नभइ अर्पण कोइराला र इन्स्पेक्टर कुमोद ढुंगेलको सुनियोजित तरिकाले हत्या गरेको बताउदै अाएकी छन् । डिएसपि साैमेन्द्रसिहं रठोरलाइ पनि अारोप लगाएकी थिइन् ।
यही बेला खुश्बुकी पूर्व प्रेमी अर्पणले मुख खोलेका छन्, ‘दिनेशको मृत्युमा म पनि दुःखी छु । उसले मलाइ मर्छु भन्थ्याे । मैले पनि त्यतिबेला मुखमा जे अायो त्यही भन्थे । उहाैले पनि त्यस्तै बोल्नुहुन्थ्यो । तर म त्यस्तो खुबी भएको मान्छे कहाँ हुँ र, जसले राज्यको संयन्त्र लगाएर उहाँलाइ इन्काउन्टर गर्न सकुँ ।’
व्यापारको सिलसिलामा भारतमा रहेको जनाउदै उनले अपराधखबरलाइ भनेका छन्, ‘यो सबै खुस्बुजीको अक्रोश हो, खुश्बु मेरो गर्लफ्रेन्ड हो भन्ने थाहा पाउदा पाउदै कुमोद दाइले कसरी प्रस्ताव राख्नुहोला र?’ खुश्बुकाे कुरा घटिया भएको अर्पणले बताएका छन् । उनले यो कुरा सुनेर अाफु छक्क परिरहेको कान्तिपुर साप्ताहिकमा खबर छ ।
« Reply #14 on: August 15, 2014, 12:10:29 PM »
खुश्वुको पिता भन्थे अर्पण र खुश्वु आदर्श जोडी(भिडियोसहित)
प्रहरी भिडन्तमा गुण्डा नाइके दिनेश अधिकारी चरि मारिएपछि श्यामसुन्दर ओली त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेर चर्का नारावाजी गरिरहेका थिए। आफन्त गुमेको पीडा भनेर कतिले सहज रुपमा लिए। उनको उत्तेजना रोकिएको थिएन। घटना भएको राती अस्पतालमा तोडफोड समेत भयो। यसमा तिनै श्याम ओली अग्रसर थिए। घटनामा नेता जस्तै प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहेका ओलीसँग बुझ्दा उनी अधिकारीका कुनै औपचारिक नाताभित्रका मानिस थिएनन। अधिकारी आफ्नी छोरी खुश्बुसँग नाता जोडिने तरखरमा रहेका व्यक्ति भएको खुलेपछि उनले अस्पतालमा मच्चाएको उपद्रो गलत नै भएपनि एक अर्थमा सहि थियोकी भन्न समेत सकिन्थ्यो। तिनै श्यामसुन्दरले छोरी खुश्वुको तालमा ताल मिलाउँदै अधिकारीको मृत्यु प्रकरणमा अर्पणको संलग्नता भएको प्रतिक्रिया समेत दिए।
तिनै श्याम सुन्दर करिव ४ बर्ष अघी यसैगरि आफ्नी छोरी र उनकी प्रेमी अर्पणको वखानमा खुलेर आएका थिए। अर्पणको पिताले शुरु गरेको संस्था ह्युमन वेलफेयर ग्रुपले गरेका सामाजिक कामको प्रशंसामा श्यामसुन्दरले खुश्वु र अर्पणलाई समाजसेवाको आदर्श जोडीको रुपमा सह्राएका थिए। सपना आमा घरको काम होस वा झापामा रिक्सा वितरणको काम कोशीका डुवान पिडितलाई सहयोग पुर्‍याउने काममा उनको सामाजिक संस्था लागेको थियो। खुश्वु सो संस्थाको उपाध्यक्ष थिइन। अर्पण पैत्रिक सम्पति बेचेर भएपनि सामाजिक काममा खुश्वुलाई सघाइरहन्थे।
खुश्वुलाई केन्द्रमा राखेर सन् २०११ मा तयार गरिएको एक भिडियोमा उनको कामको तारिफ गरिरहँदा अर्पणको पनि तारिफ गरिएको छ। तत्कालिन समयमा कान्तिपुरका पत्रकारहरुको टीमले तयार गरेको सो भिडियोका लागि शुरेस पौडेलले स्क्रिप्ट तयार गरेका थिए। जस्लाई अंग्रेजीमा पत्रकार सोमेश वर्माले भाषानुवाद गरेका थिए। टेलिभिजनका चर्चित हस्ती भुषण दाहालले भिडियोमा अंग्रेजीमा आवाज दिएका थिए। सो भिडियोको तारिफ सुन्दा लाग्छ संसारकै आदर्श जोडीको रुपमा खुश्वु र अर्पणले समाजसेवामा पाइला राख्दै थिए। काम गर्दै थिए।
पिता श्यामसुन्दरले भनेजस्तै यो आदर्श जोडीको बीचमा आएका धार्दिङका अधिकारी २०७१ साउनमा मारिएपछि सबै कुरा एकपछि अर्को गर्दै उदाङगो हुँदै गएको छ। सबका इज्जत घरघरको वहशको बिषय भएको छ।
« Reply #15 on: August 16, 2014, 12:38:02 AM »
'चरी'को गैरन्यायिक हत्या गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट
धादिङका दिनेश अधिकारी 'चरी'को गैरन्यायिक हत्या गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
चरीका दाजु ध्रुव अधिकारीले भाइको हत्या गैरन्यायिक भएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्रालय र प्रहरीले अनुसन्धान गर्नसमेन नमानेको भन्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
हत्याविरुद्ध अधिकारी परिवारले महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकामा दिएको जाहेरी प्रहरीले लिन मानेको थिएन ।
रिटमा काठमाडौं प्रहरी प्रमुख उत्तमकुमार कार्की, अपराध अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख पुष्कर कार्की, डीएसपी मिरा चौधरी, इन्स्पेक्टर कुमुद ढुंगेल र चरीकी प्रेमिका खुश्वु ओलीका पूर्वप्रेमी अर्पण कोइरालालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
अधिकारी काठमाडौंबाट धादिङ जानेक्रममा साउन २१ गते 'क्रस फायरिङ'मा मारिएको प्रहरीले दाबी गरेको छ । परिवारजन र आफन्तले भने अधिकारीको प्रहरीले पक्रेर हत्या गरेको भन्दै शव जिम्मा लिएका छैनन् ।
प्रकाशित मिति: २०७१ श्रावण ३० ०४:०२
« Reply #16 on: August 17, 2014, 08:35:11 AM »
चरीको शोकमा बालक र कर्मचारीको कपाल मुण्डन
प्रहरी ‘इन्काउन्टर’मा मारिएका डन दिनेश अधिकारी ‘चरी’को शोकमा उनकी प्रेमिका खुश्वु ओलीले आफ्नो बालगृहका बालक तथा कर्मचारीका कपाल मुण्डन गराएकी छन् । उनले आफुले सञ्चालन गर्दै आएको विशालनगरस्थित बालगृह ‘सेल्टर’मा आश्रित बालक तथा कर्मचारीको कपाल मुण्डन गराएकी हुन् ।
चरी मारिएको भोलिपल्टै उनले बालगृहका २० भन्दा बढी बालकलाई एकैपटक कपाल मुण्डन गर्न लगाएकी थिइन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । बालगृहको अध्यक्ष खुश्वुले चरी मारिएको भोलिपल्ट बालक र कर्मचारी सबैले केश मुण्डन गरेको बताइन् ।
« Reply #17 on: August 17, 2014, 09:27:06 AM »
चरीको पोस्टमार्टमः ६ गोली बाहिरियो, एउटा शरीरमै अड्कियो
प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएका डन दिनेश अधिकारी चरीको शरिरमा सात गोली लागेको पाइएको छ। घटनाको १० दिनपछि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा शनिबार पोस्टमार्टम गरिदाँ चरीको शरीरमा सात गोली लागेको पाइएको हो।
पोस्टमार्टमको रिर्पोट अनुसार छाती र पेटको बीच भागमा लागेका सातमध्ये ६ गोली ढाड छेडेर बाहिर निस्केका थिए भने एक गोली शरीरभित्रै अड्किएको थियो। अस्पतालका फरेन्सिक विभाग प्रमुख डाक्टर हरिहर वस्तीका अनुसार गोली नै उनको पोस्टमार्टममा देखिएको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित समाचारमा छ।
पक्राउ गरेर हत्या गरिएको जस्तो कुनै प्रमाण नभेटिएको उनले बताए। गोलीले चरीको छाती तथा पेटमा रहेका मुटु, फोक्सो, कलेजोजस्ता सबै महत्वपूर्ण अंग क्षतविक्षत गराएको डाक्टर वस्तीले बताए। पोस्टमार्टम भए पनि आफन्तले चरीको शव बुझेका छैनन्। आठ महिनाअघिदेखि वान्टेडमा रहेका चरी २१ साउनमा मारिएका हुन्।
« Reply #18 on: August 17, 2014, 09:28:21 AM »
चरी मर्दा सभासद् चिच्याउनुको रहस्य खुल्दै
August 16th, 2014 | by Weekly Nepal
नेपाल प्रहरीको ‘मोस्टवान्टेड’ सूचीमा रहेका एक खुँखार अपराधी प्रहरीसँगको मुठभेडमा मारिएपछि नेकपा एमालेका जिम्मेवार नेताहरूबाट प्रस्तुत व्यवहारलाई लिएर मुलुकमा चिन्ता व्याप्त भएको छ। अपराधीहरूलाई राजनीतिक संरक्षण रहेको भनी धेरैले भन्ने गरे पनि औपचारिक तवरमा त्यसको पुष्टि हुन नसकेको सन्दर्भमा कुख्यात अपराधी दिनेश अधिकारी चरी मारिएपछि एमालेले उक्त तथ्यको पुष्टि गरिदिएको छ। देशमा जघन्य अपराधका कैयन घटना हुँदा नबोल्ने एमाले नेताहरू, कैयन होनहार मानिस मारिँदा अपराधीको खोजी गरी कारबाही गर्न कुनै प्रकारले दबाब दिन आवश्यक नठान्ने उनीहरू कुख्यात डन चरीको मृत्युमा यसरी क्रूद्ध भए– मानौँ, उनीहरूको शीर्षस्थमध्येकै नेता मारिएका थिए वा आर्थिक स्रोतको प्रमुख केन्द्रलाई नै सिध्याइएको छ। जिल्लावासीको नाताले भन्दै धादिङका केही सभासद्ले डन हत्या प्रकरणमा प्रहरीविरुद्ध दिएको अभिव्यक्ति हेर्दा लाग्थ्यो– ‘आम्दानीको निकै ठूलो स्रोत अब बन्द भएको छ। प्रहरीसँगको मुठभेडमा मारिएका डन चरी जसको बारेमा सांसद राजेन्द्र पाण्डेलगायतका केही एमाले नेताहरू क्रूद्ध र चिन्तित बनेका छन्, ती चरीले के–के गरेका थिए र कति सीधासाधा नेपाली यिनको सिकार बन्नुपरेको थियो भन्ने विषयमा बुझियो भने मुटु भएका हरेक मानिसको आङ नै जिरिङ्ग हुने स्थिति छ।
०६० तिर डन कुमार घैँटेसँग मिलेर सोह्रखुट्टे, नयाँबजार र बालाजु क्षेत्रमा हप्ता असुली सुरु गर्दै अपराध जगत्मा पाइला हालेका दिनेश अधिकारी चरी मानिसको हत्या र अपहरणका कैयन घटनामा समेत संलग्न रहँदै आएका थिए। व्यापारी तथा विभिन्न पेसा–व्यवसाय गर्ने अन्य व्यक्तिहरूसँग बलपूर्वक असुलेको पैसा मोजमस्ती र गुण्डादस्ताको पालनपोषणमा खर्च गर्ने चरीले केही ढावा, रेस्टुरेन्ट र क्यासिनो भेनसमा नगद लगानी पनि गरेका थिए। ०६३ देखि घैंटेसँग छुट्टिएर एक्लै आपराधिक गिरोह सञ्चालन गर्दै आएका चरीले ०६४ मा धादिङको सिँचाइ कार्यालयमा भएको टेण्डरमा ठेकेदारहरूबाट दुई लाख पच्चीस हजार असुलेका थिए। ०६५ देखि यार्सागुम्बा लुट्ने कार्यमा संलग्न चरीले हालसम्म आठपटक गरी चालीस केजी यार्सागुम्बा लुटेको प्रमाण प्रहरीसँग रहेको छ। सो परिमाणको यार्साको मूल्य दुई करोडभन्दा बढी पर्ने बताइन्छ। चरीले त्रास देखाई रकम असुल्ने, ठेक्कापट्टामा जबर्जस्ती रकम असुलीका निम्ति गुण्डादस्ता खटाउने र अलिक ठूलै रकमको ठेक्का भएमा आफैँसमेत सहभागी भई नगद असुल्ने, मानिस उपहरण गरी फिरौती माग गर्नेजस्ता काम गर्दै आएको भए पनि उसका विरुद्ध उजुरी दिने हिम्मत कसैले पनि गर्दैनथे। तथापि उसका विरुद्ध केही उजुरी भने प्रहरीमा परेका छन्। जयराम बानियाँ, एडा भनिने सुनील पाण्डे र रविन भनिने रामेश्वर सापकोटाले चरीले पठाएको भन्दै लाखौँ रुपैया माग गरेपछि हरिप्रसाद शर्मा काफ्लेले ०७० फागुनमा उजुरी दिएका थिए। यिनै व्यक्तिहरूले चरीको नाम लिँदै रकम मागेर हैरान बनाएपछि नवराज अधिकारीले पनि प्रहरीमा उजुरी दिने हिम्मत जुटाएका थिए। उल्लिखित दुवै घटनामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरू पक्राउ परे पनि चरी फरार थिए। ०६२ कात्तिक १५ गते प्रकाशराज सिलवाललाई खुकुरी प्रहार गरी घाइते बनाउने चरी पक्राउ परे पनि हिरासतबाटै भाग्न सफल भएका थिए। त्यसैगरी अरुण शर्मा र लक्ष्मण बस्नेतसहित तीनजनालाई घातक हतियार प्रयोग गरी सख्त घाइते बनाएपछि चरीलाई पक्राउ गरी एघार महिनासम्म कैदमा राखिएको थियो। ०७० कात्तिकमा गैंडाको खाग तस्करीमा सप्रमाण पक्राउ परेका चरी राजनीतिक दबाबमा छुट्न सफल भएका थिए। तर, धादिङकै राधाकृष्ण (राधे) भण्डारीलाई ज्यान लिने हमला गरेयता भने चरीले भारत र नेपालमा लुकिछिपी आफ्नो धन्दा चलाउँदै आएका थिए। काठमाडौं वडा नं. १६ मा ससुराली घरमा बस्दै आएका पच्चीस वर्षीय केशवबहादुर गुरुङसँग जबर्जस्ती पैसा असुली गर्न चरीले खटाएका अस्मित बस्नेतको भने निज गुरुङले पैसा लिन आउनु भनी बोलाएर हत्या गरिदिएका थिए। धादिङको बालुवा र ढुङ्गाखानी तथा एक जलविद्युत् आयोजनामा समेत लगानी गरेका चरीले धादिङकै एक–दुई सभासद्सँग मिलेर जग्गाको कारोबार गर्ने गरेकोसमेत जानकारीमा आएको छ। एमालेका दुई सभासद् (धादिङ) हरूको आम्दानीको ठूलो स्रोत चरी बनेकोले पनि चरीबध प्रकरणलाई लिएर उनीहरू अस्वाभाविक रूपमा ‘रियाक्टेड’ भइरहेको बताइन्छ।
नेपाल प्रहरीले पछिल्लो समयमा गुण्डागर्दीविरुद्ध विशेष कारबाही सुरु गरेको छ। प्रहरी सक्रियताकै क्रममा मुठभेडमा परी चरीको ज्यान गएको छ। प्रहरीले चरीको आर्थिक कारोबारको सबै नसा पत्ता लगाउन अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसरी प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेपछि चरीसँग आर्थिक सम्बन्ध भएका धादिङका केही सभासद्हरू मानवअधिकारवादी व्यक्ति र संस्थाहरूलाई गुहारी आफ्नो बचाउ गर्ने प्रयासमा लागेका छन्। जे होस्, यसपटक नेकपा एमालेले अपराधीहरूको संरक्षण राजनीतिक तहबाट नै भइरहेको तथ्यबारे सिङ्गै देशवासीलाई जानकारी गराएको छ।
« Reply #19 on: August 18, 2014, 09:17:45 AM »
खुश्बुको अर्को हत्कण्ड : अनाथ बालकहरुमाथि जबर्जस्ती...
प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएका डन दिनेश अधिकारी चरीको हत्यापछि विभिन्न हत्कण्ड अपनाउदै आएकी खुश्बु ओलीले फेरी अर्को हत्कण्ड अपनाएकी छिन ।
चरीको हत्या र उनीसंग आफ्नो सम्बन्धलाई लिएर निकै मिडिया पब्लिसिटीमा आइरहेकी खुश्बुको पछिल्लो हर्कतले त उनी यतिखेर कसरी हुन्छ,मिडिया पब्लिसिटी चाहन्छिन भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ ।
चरीको निधनको शोकमा उनकी प्रेमिका खुश्वुले आफ्नो बालगृहका बालक तथा कर्मचारीको कपाल जबर्जस्ती मुण्डन गराएकी छिन् ।
उनले आफूले संचालन गर्दै आएको विशालनगरस्थित बालगृह सेल्टरमा आश्रीत बालक तथा कर्मचारीको कपाल मुण्डन गराएकी हुन् । चरी मारिएको भोलिपल्टै उनले बालगृहका २० भन्दा बढी बालकलाई एकै पटक कपाल मुण्डन गर्न लगाएकी छिन् ।
बालगृहका अध्यक्ष खुश्वुले चरी मारिएको भोलिपल्ट बाल र कर्मचारी सबैले मुण्डन गरेको बताईन । चरी बालगृहमा आइरहने भएकाले उनको सम्मानस्वरुप केटाकेटीले कपाल मुण्डन गरेको उनको भनाई छ ।
बालगृहमा सडक बालवालिका र कर्मचारी गरी ३५ जना छन् । उनले डेढ वर्षदेखि बालगृह संचालन गर्दै आएकी छिन् । उनका अनुसार बालगृह संचालन गर्न प्रतिमहिना २ लाख लाग्छ ।